Almancax Yakavanzika Policy
Seku www.almancax.com, tinoremekedza zvaunofunga uye tinoedza kuita kuti iwe uite saizvozvo munguva yako paine nzvimbo yedu. Tsanangudzo pamusoro pekuchengetedzwa kwemashoko ako ega anotsanangurwa pasi apa uye inowanikwa kune zvaunowana.
Kufanana nemamwe mapurogiramu e-web standard, www.almancax.com inochengetedza mafaira ekugadzirisa zvinangwa. Aya mafaira; Iine mashoko akadai akadai se IP address, Internet service provider, browser browser, system operating and pages-login-exit. Mafaira eIndaneti haambotishandiswi pane zvinyorwa zvinotarisirwa uye haazvidzi kubvunza kwako pachako. Kero yako ye IP uye mamwe mashoko haabatanidzi nemashoko ako ega.
Tingave tichishevedzera mamwe makambani panzvimbo yedu (Google, etc.). Izvi zvipikisi zvinogona kunge zvine makiki uye zvinogona kuunganidzwa nekambani idzi uye hatikwanise kuzviwana.
www.almancax.com inoshandisa Google Adsense advertising system. Iri sangano rinoshandiswa neGoogle kuti rigone kushambadzira pane mawebsite evaridzi anoratidza AdSense yezvinyorwa zvinogadzirwa. DoubleClick DART cookie Rine.
Semutengesi wechitatu-bato, Google inoshandisa makuki kushambadza pane yedu saiti. Nekushandisa makuki aya, inopa kushambadzira zvichienderana nekushanyira vashandisi vedu, saiti yedu uye mamwe masosi paInternet.
Users Google nhamba yehutano uye yehutano hwehutano hwemagariro Unogona kudzivisa kushandiswa kweDART cookie nekushanyira. Google inoshandisa makambani ekuparidzira evanhu vatatu kuti vape zvivako zvemashambadziro paanoshanyira webhusaiti yedu. Makambani aya anogona kushandisa ruzivo (kunze kwezita rako, kero, kero ye email kana nhamba yefoni) kubva kushanyira kune idzi masayiti uye mamwe mawebsite kuti akuratidze kushambadzira kwezvigadzirwa nemasevisi anokufarira. Kuti udzidze zvakawanda pamusoro pekushandiswa uku uye kuchengetedza ruzivo rwakadaro kushandiswa nekambani idzi, tsvaga zvaunosarudza uye NAI Kuzvitongesa wega nheyo dzevaparidzi Unogona kushandisa Annex A yeiyo (PDF) gwaro.
Izwi rekuti "kuki" rinoshandiswa kutsanangura diki faira renhamba iro peji rewebhu revhavha rinoisa pakomputa yako hard disk. Zvimwe zvikamu zvesaiti yedu zvinogona kushandisa makuki kuti ape mushandisi nyore. Uye zvakare, makuki nemawebhu mabheboni anogona kushandiswa kuunganidzwa kwemashoko ekushambadzira kuburikidza neshambadziro dzinowanikwa pane ino saiti. Izvi zvinoitwa zvizere nemvumo yako, uye zvinokwanisika kudzivirira izvi nekushandura magadziro ewebhu browser rako pane chako chikumbiro.
Shanduro almanx.com inopa mazano kune dzimwe nzvimbo dzeIndaneti kubva pamapeji ayo. almanx.com haisi mutoro wezvakagadzirwa kana zvigadziro zvehutano zvemasayiti iyo inobatanidza uye inosimudzira mabhanhire. Nzira yekubatanidza inotaurwa pamusoro apa inonzi yakanyorwa se bulunma referencing ..
pamusoro pehutano hwepachivande hwakaitwa pa almanx.com; Kana uine mibvunzo, zvinyorwa nemafungiro tapota tibvunze nesu pa almanx [pa] gmail.com.